OnePlus 6T ayaa la bilaabi doonaa bisha Oktoobar iyada oo sicirka la kordhiyay lagu daray | Androidsis
Dhowr bilood ka hor OnePlus 6 ayaa ku dhacay suuqa. Waa dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha, oo guulo waaweyn ka gaadhay suuqa caalamiga ah. Sidii caadiga ahayd, shirkaddu waxay ka shaqeyneysaa nooc ka mid ah oo la hagaajiyay oo imaan doona deyrta. Waxaan ka hadleynaa OnePlus 6T, oo horeyba noo soo gaadhay waxa laga yaabo inay noqon karto taariikhda la bilaabayo, ugu yaraan si ku meel gaadh ah.
OnePlus 6T wuxuu noqon doonaa nooc aad ugu eg taleefanka la bilaabay dhowr bilood ka hor. Waxoogaa horumar ah ayaa la filayaa, in kastoo xilligan aan la ogeyn meelaha laga horumarin doono.
Telefoonkan ayaa la filayaa inuu suuqa soo galo bisha Oktoobar. Marka shan bilood ayaa ka soo gudbi doonta inta u dhaxeysa soosaarka mid kasta oo ka mid ah labada nooc ee soo saaraha. Muddo gaaban oo cadaalad ah, taasina waxay saameyn ku yeelan kartaa iibinta labada taleefan.
Sidoo kale, OnePlus 6T ayaa la filayaa inuu la yimaado qiimo koror. Waan xaqiijin kari waayey, in kastoo warbaahinta qaar ayaa sheeganeysa in taleefanka uu ku kacayo $ 550. Taas oo ah qiimo koror yar, oo kaliya $ 20, marka loo eego qaabkii asalka ahaa ee la bilaabay guga. Farqiga yar ee kiiskan.
Inkasta oo sumcadda lagu canaanto xaqiiqda ah in moodelkeedu kor ugu kaco qiimaheeda sanad walba. Sidaa darteed, suuqa lagama yaabo inuu sifiican u helo intaas oo dhan kororka sicirka ee loo maleynayo in loo qorsheeyay midkaan OnePlus 6T. Haddii ay kororka sicirkani yahay kii ugu dambeeyay.
Xilligan isbeddelada lagu soo bandhigi doono OnePlus 6T lama yaqaan. Tusaalihii sanadkii hore wuxuu lahaa xoogaa hagaajin naqshadeyn ah, iyo astaamo kale oo yar. Laakiin isbeddellada ma ahayn kuwo xad-dhaaf ah. Sidaa darteed, waxay umuuqataa in sanadkan aanan fileynin isbeddelo xag-jir ah oo ka imanaya nooc kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus 6T wuxuu imaan lahaa Oktoobar oo leh qiimo koror
Haddii aad runtii u xiisto Sim City, halkan waxaa ah Pocket City ee loogu talagalay Android-kaaga